MAITIRO EKURANGARIRA EMAIL MUAPTLOOK? TUMIRA EMAILS - NYORO
Maitiro Ekurangarira Email muAptlook?
Wakambotumira email nekanganiso uye wakazvidemba ipapo? Kana iwe uri mushandisi weAptlook, ipapo unogona kugadzirisa kukanganisa kwako. Hechinomaitiro ekurangarira email muAptlook.
Pane dzimwe nguva patinodzvanya bhatani rekutumira nekukurumidza uye kutumira asina kukwana kana zvisirizvo maemail. Aya mhosho anogona kutungamira kune zvakakomba mhedzisiro zvichienderana nedanho rekukomba kwehukama pakati pako newe anogamuchira. Kana iwe uri mushandisi weAptlook, ipapo panogona kuve nemukana wekuponesa kumeso kwako nekurangarira iyo email. Unogona kutsiva kana rangarira email muAptlook mukungodzvanya mashoma kana mamwe mamiriro akagutsikana uye chiito ichiitwa nenguva.
Mamiriro Ekutsiva kana Kuyeuka email yawakatumira muAptlook
Chii chichaitika mushure mekurangarira kana kutsiva Email muAptlook?
Imwe nzira yekurangarira kana kutsiva Meseji muAptlook
Kunonoka Kutumira Emails muOptlook
Kunyangwe maitiro acho ku dzosa kana kutsiva email muAptlook iri nyore kwazvo uye inogona kuitwa mune mashoma mashoma, chimiro chinogona kushandiswa chete kana mashoma mamiriro akagutsikana. Tisati tasvetuka pamatanho, ngationgororei mamiriro akanaka ekurangarira kana kutsiva email.
Wese iwe nemumwe mushandisi munofanirwa kuve neMicrosoft Exchange kana hofisi yeOfisi 365.
Iwe unofanirwa kunge uri kushandisa Outlook muWindows yako. Iyo yekuyeuchidza chimiro hachiwanikwe kune veOptlook vashandisi paMac kana paWebhu.
Azure Ruzivo Dziviriro haifanire kuchengetedza meseji yemugashi.
Iyo email inofanirwa kunge isingaverengeke nemugamuchira mubhokisi reinbox. Chiyeuchidzo chekuyeuka hachizoshandi kana iyo email ichiverengwa kana kusefa nemitemo, mafirita e spam, kana chero mamwe mafirita mubhokisi rekugamuchira.
Kana zvese zviri pamusoro mamiriro ari akanaka, saka pane mukana wakakura wekuti iwe unogona rangarira email muAptlooknekutevera matanho ari pazasi:
Iyi nzira inogona kushandiswa nevashandisi paAptlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2016, uye Outlook 2019 uye Office 365 nevashandisi veMicrosoft Exchange.
1. Tsvaga iyo ' Zvinhu Zvakatumirwa ’Sarudzo uye baya kuti uvhure.
Edge haigone kusvika peji rino windows 10
2. Vhura meseji iwe unoda kutsiva kana kuyeuka nekudzvanya-kaviri pairi. Icho chimiro hachizowanikwe kune chero meseji pane iyo Kuverenga Pane.
maitiro ekuwedzera hibernate sarudzo mumawindo 10
3. Dzvanya pa ' Zviito ’PaMharidzo tab. Menyu inodonha ichaonekwa.
4. Dzvanya pa ' Yeuka meseji yacho . ’
5. Iyo 'Yeuka iyo meseji' 'dialog bhokisi ichaonekwa. Unogona kusarudza imwe yesarudzo mbiri dziri mubhokisi. Kana iwe uchingoda kubvisa yako email kubva kune inogamuchira inbox, wobva wasarudza iyo ' Delete asina kuverengwa makopi emessage iyi ’Sarudzo. Iwe unogona zvakare kutsiva email neimwe nyowani nekusarudza iyo ' Delete asina kuverengwa makopi uye kutsiva neshoko nyowani ’Sarudzo.
6. Tarisa ' Ndiudze kana ndangariro dzikabudirira kana kukundikana kune mumwe nemumwe anogamuchira ’Bhokisi kuti uzive kana kwako kuyeuka uye kutsiva kuyedza kwakabudirira kana kwete. Dzvanya pa Zvakanaka .
7. Kana iwe ukasarudza iyo yekupedzisira sarudzo, ipapo hwindo rine yako yekutanga meseji ichavhura. Unogona kushandura uye kugadzirisa zviri mukati meemail yako sezvaunoda uye wozvitumira.
Kana iwe ukasawana sarudzo yekuyeuka, saka pane mukana wekuti imwe yemamiriro ari pamusoro apa haina kugutsikana. Yeuka iyo email muAptlook nekukurumidza kana iwe uchinge waona kukanganisa kwako sezvo iri nhangemutange inopesana nenguva uye kana ivo vanogamuchira vakaverenga meseji kana kwete. Kana iwe ukatumira iyo email kune vakawanda vashandisi, saka iyo yekuyedza kuyedza ichaitwawo kune vese vashandisi. Iwe haugone kusarudza sarudzo dzekurangarira dzevashandisi vakasarudzwa muAptlook.
Uyezve Verenga: Maitiro Ekugadzira iyo Nyowani Email.com Email Akaundi?
windows 10 isina waya icon isipo
Mushure mekuita kwako kuyedza, kubudirira kana kukundikana kunoenderana nemamiriro ezvinhu uye zvinhu. Iwe waizoziviswa nezve budiriro kana kukundikana dai iwe wakatarisa iyo ' Ndiudze kana ndangariro dzikabudirira kana kukundikana kune mumwe nemumwe anogamuchira ’Sarudzo mubhokisi rebhokisi. Mumamiriro ezvinhu akakodzera, mugashiri haazomboziva kuti meseji yakayeukwa kubva mubhokisi rake Kana iyo ‘ Gadzirisa otomatiki zvikumbiro zvemisangano uye mhinduro kuzvikumbiro zvemusangano ’Inogoneswa kudivi remugashiri, saka haufanire kunetseka nezve chero chinhu. Kana yakaremara, ipapo iye anogamuchira anowana chiziviso chemashoko ekurangarira chiito. Kana ziviso ikadzvanywa kutanga, ipapo meseji inozorangarirwa, asi kana iyo inbox yakavhurwa kutanga uye mushandisi akavhura meseji yako, kuyeuka kunenge kusingabudirire.
Iko hakuna vimbiso yebudiriro kana uchirangarira meseji muAptlook. Mamiriro ezvinhu anodikanwa anogona kunge asingagutsikane pese paunokanganisa. Inogona kuburitsa meseji isiri iyo kune vanogamuchira uye woita kuti utaridzike seusingabatsiri. Iwe unogona kushandisa imwe nzira iyo ichave iri kupfuura kubatsira mune ramangwana.
Kana iwe uri munhu ane basa, saka kutumira mhosho-yakazadza mameseji kunogona kukanganisa chimiro chako. Unogona kunonoka nguva yekutumira email muAptlook kuitira kuti uve nenguva yekugadzirisa zvikanganiso zvako. Izvi zvinoitwa nekuchengeta maemail muAptlook Outbox yeimwe nguva yakati usati waatumira kune mumwe mushandisi-wekupedzisira.
1. Enda kune iyo Faira Tab.
2. Sarudza ' Manage Mitemo uye Alerts sarudzo 'Pasi pechikamu cheinfo mu' Manage Mitemo uye Alerts . ’
3. Dzvanya pane iyo 'Email Mitemo 'Tab uye sarudza' Mutemo mutsva . ’
4. Enda ku ' Kutanga kubva pamutemo usina chinhu ’Chikamu muMitemo Wizard. Dzvanya pa ' Nyorera mutemo pane meseji yandinotumira 'Uye tinya' Inotevera . ’
5. Sarudza ' Dzorera kuendesa nemaminetsi akati wandei ' mu ' Sarudza chiito (s) ’Ndandanda.
6. Sarudza nhamba ye 'mu' Hora mutemo tsananguro ’Ndandanda.
7. Nyora huwandu hwemaminetsi aunoda kuti email yako inonoke mu ' Kunonoka Kununurwa ’Bhokisi. Iwe unogona kusarudza yakakwira maminetsi zana nemakumi matanhatu. Dzvanya pa Inotevera .
8. Sarudza chero kusarudzika kwaunoda uye tinya ‘ Inotevera . ’
9. Ipa zita kumutongo wako mu ' Tsanangura zita remutemo uyu ’Bhokisi. Tarisa ' Batidza mutemo uyu 'Bhokisi uye tinya' Pedza . ’
10. Dzvanya pa Zvakanaka kuisa shanduko.
haikwanisi kubatanidza kune proxy server
Nekunonoka iwo chaiwo iwo meseji panguva yekunyora:
Paunenge uchinyora meseji, enda kune iyo ' Sarudzo 'Tab uye sarudza' Kunonoka Kuendesa . ’
Sarudza iyo ' Usanunure pamberi 'Sarudzo mu' Zvivakwa ’Dialog box.
Sarudza iyo zuva nenguva iwe unoda kuti meseji itumirwe uye vhara hwindo.
Gadzirisa Outlook isingabvumirane pane Android
Maitiro Ekutumira Karenda Koka muAptlook
Maitiro Ekubvisa Dhinda Mhete MuWindows 10?
Sei Kurekodha Slow-inofamba Mavhidhiyo pane Chero Android Runhare?
Tinovimba mutungamiriri uyu akabatsira uye iwe wakakwanisaku rangarira email muAptlook . Shandisa sarudzo yekuyeuka nekukurumidza kana iwe uchinge waona kuti wakanganisa. Iwe unogona zvakare kusarudza kunonoka meseji yako nekutevera nhanho dziri pamusoro kana iwe uchiwanzo kubata nekanganiso zvakanyanya. Kana, zvakadaro, haugone kutsiva kana rangarira email paAptlook , uye tumira ruregerero kune vanogamuchira uye utumire imwe email ine chaiyo meseji.
Laptop screen kupenya hakuzogadzirise windows 10
mms mameseji asiri kurodha pasi android
maitiro ekugadzirisa isu hatina kukwanisa kupedzisa izvo zvekuvandudza
maitiro ekugadzira chrome nekukurumidza pamawindows 10
windows 10 kusimudzira mubatsiri akanamira pa 99
kugadzirisa windows kugadzirisa huori hwe database